ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူနာတော်တော်များများ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားတဲ့အခါ…. မကြာမကြာပြောလေ့ရှိတာကတော့…. “ဆရာ.. ကျွန်တော်ခေါင်းမူးလို့ အကြောဆေးသွင်းချင်လို့” “ကျွန်မအားနည်းနေလို့ ဆလိုင်းချိတ်ပေးပါ” “ကျွန်တော်က တစ်လတစ်ခါ အကြောဆေးသွင်းနေကျ… မသွင်းရင် နေမကောင်းဘူး… ခု ဆေးသွင်းဖို့ ရက်ပြည့်နေပြီ ဆိုတော့ လုပ်ပေးပါဦးဆရာ” …. ဒီလိုတွေ ပြောပြီး အကြောဆေးသွင်းပေးဖို့ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းတွေကို တောင်းဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်…
ဆေးအနီလေးတွေ… အ၀ါလေးတွေ အကြောထဲ၀င်သွားတာ… ပုလင်းကြီးထဲကဆေးရည်တွေ တစက်စက်ကျတာကို မြင်နေ ရရင်ပဲ သဘောကျကြသူအများသား။ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲရင် အကြောဆေးထိုး… ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ရင် အကြောဆေးထိုး ကြ… အိပ်ရေးပျက်ရင်လည်း အကြောဆေးထိုးကြတယ််။ ထိုးပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုကြတယ်။ အကြောဆေးမထိုးရင်ဘဲ ရောဂါမပျောက်သလို ထင်ကြတာလဲရှိ…အကြောဆေးထိုးတာကို စွဲနေသူတွေတောင်ရှိကြပါတယ်..။
အကြောဆေးဟာ လုံး၀ မဖြစ်မနေ မထိုးသင့်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကျတာ၊ ၀မ်းလျှော၀မ်းပျက်တာ ဒါမှမဟုတ် အန်တာများတဲ့အခါ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှူဖြစ်တဲ့အခါ၊ မီးလောင်ခံရတာမျိုးမှာ၊ ပါးစပ်ကနေဘယ်လိုမှ စားမရနိုင်တဲ့ရောဂါအခြေအနေမျိုး ဥပမာ ပါအာသီးဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးယောင်ပြီးပြည်တည်နေတာမျိုး၊ အစာရေမျိုကင်ဆာမျိုး နဲ့ တချို့သောအခြေအနေတွေမှာ အကြောဆေး ကို မဖြစ်မနေသွင်းရပါတယ်။
တခါတရံမှာ ပိုဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတောင် ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ heart failure လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့လူနာမျိုးမှာ ၊ အဆုတ်မကောင်းတဲ့လူနာမျိုးနဲ့ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေမှာ ပုလင်းကြီးကို ခပ်မြန်မြန်ချိတ်မိတဲ့အခါ အသက်အန္တရာယ်တောင်မှ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ မှာဆိုရင်လည်းပိုလို့တောင် သတိထားသင့်ပါတယ်။